TA and FA ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်ကြပါသလဲ။ – Myanmar Forex Villa
TA and FA ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်ကြပါသလဲ။
Fundamental သမား တွေဟာ market movement တွေရဲ့ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို လေ့လာနေစဉ်မှာပဲ technical သမား တွေကတော့ market movement တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကျိုးတရားတွေကို လေ့လာနေကြပါတယ်။ အောင်မြင်သော traders အများစုဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ် ရဖို့ အတွက် နည်းစနစ် နှစ်ခုစလုံးကို ပေါင်းစပ်ပြီး အသုံးပြုကြလေ့ ရှိကြပြန်ပါတယ်။
Technical analysis ဆိုတာ အတိတ်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့ market action တွေကို ပြနေတဲ့ Charts တွေပေါ်မှာ လေ့လာပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက်လာမယ့် အနာဂတ် market trends တွေနဲ့ price movement တွေကို ဟောကိန်းထုတ်တဲ့ (တွက်ထုတ်တဲ့) နည်းစနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းစနစ်ဟာ trading volume, Price of instruments တွေ ဖြစ်ရမယ့် အခြေအနေတွေ ထက်ကို ဈေးကွက်ထဲမှာ အမှန်တကယ် ဘာတွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲ ဆိုတာနဲ့ ပိုမိုသက်ဆိုင်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ data အချက်အလက်တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ Charts တွေကို ရေးဆွဲ ဖန်တီးထားပြီး ပြန် လည် အသုံးချတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Technical analysis ရဲ့ အဓိကကျတဲ့ အားသာချက် တစ်ခုကို ပြောပြရမယ်ဆိုရင် အတွေ့အကြုံရင့်တဲ့ Technical trader တစ်ယောက်ဟာ currencies markets များစွာနဲ့ currencies market instruments တွေကို တပြိုင်နက်တည်း အလွယ်တကူ လေ့လာ တွက်ထုတ် နိုင်တာပါပဲ။Technical analysis ဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ နိယာမ သုံးခုပေါ်မှာ အခြေခံ တည်ဆောက်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့
1. Market action discounts everything!
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ actual price ဆိုတာ လက်ရှိဈေးကွက်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အရောင်းအ၀ယ် သို့မဟုတ် အခြား အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်မှု တစ်ခုပါပဲ။ ဥပမာ Supply and demand, political factors and market sentiment တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Pure technical analyst သမား တယောက်အတွက်ကြတော့ price movements တစ်ခုနဲ့ သာလျှင် သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ အခြား သော ဘယ်ပြောင်းလဲမှုမျိုး အတွက် မှ သူ့အတွက် အကြောင်းပြချက် တစုံတစ်ရာ ပြစရာ မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူက Technical analyst သမား သက်သက်သာ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ (အခြားအကြောင်းတွေကို သူမလေ့လာပါဘူး)
Technical analysis နည်းစနစ် ဟာ Chart တွေနဲ့ ဖော်ထုတ်မှတ်သား ထားနိုင်တဲ့ အတွက် ၄င်း စနစ်ကို ဈေးကွက် အခြေအနေရဲ့ ပုံစံတွေ ကြာရှည် သိမ်းဆည်းထားရန် ရည်ရွယ်၍ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ patterns အများစုဟာ ဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်သော အထူး တွက်ထုတ်ထားတဲ့ ရလဒ်တွေလည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို မှတ်သားထားခဲ့တဲ့ patterns တွေဟာလည်းပဲ ဈေးကွက်မှာ မှန်ကန်တဲ့ အခြေခံ တစ်ခု အဖြစ် ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
Forex chart patterns တွေကို History အနေနဲ့လည်း မှတ်သားထားပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နှစ် ၁၀၀ အထက် အတွက် တောင်မှ အမျိုးအစားခွဲပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ အချိန်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ ပြောင်းလဲတက်တဲ့ လူသားတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်ဖို့ အတွက် ဒီများပြားလှစွာသော patterns တွေဟာ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်လည် ပြသပေးနေပြန်ပါတယ်။ forex charts တွေဟာ price တွေ ပါဝင်နေတဲ့ market action တွေ အပေါ်မှာ အခြေခံ ရေးဆွဲ ဖော်ပြထားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် forex technical analysis theory မှာ အမျိုးအစား အားဖြင့် (၅) မျိုး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့
· Indicators (oscillators, e.g.: Relative Strength Index (RSI)
· Number theory (Fibonacci numbers, Gann numbers)
· Waves (Elliott wave theory)
· Gaps (high-low, open-closing)
· Trends (following moving average). တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Fundamental သမား တှဟော market movement တှရေဲ့ ဖွဈစတေဲ့ အကွောငျးတရားတှကေို လလေ့ာနစေဉျမှာပဲ technical သမား တှကေတော့ market movement တှကွေောငျ့ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အကြိုးတရားတှကေို လလေ့ာနကွေပါတယျ။ အောငျမွငျသော traders အမြားစုဟာ ပိုမိုကောငျးမှနျသော ရလဒျ ရဖို့ အတှကျ နညျးစနဈ နှဈခုစလုံးကို ပေါငျးစပျပွီး အသုံးပွုကွလေ့ ရှိကွပွနျပါတယျ။
Technical analysis ဆိုတာ အတိတျက ဖွဈပျေါခဲ့ပွီးတဲ့ market action တှကေို ပွနတေဲ့ Charts တှပေျေါမှာ လလေ့ာပါတယျ။ ပွီးတော့ နောကျလာမယျ့ အနာဂတျ market trends တှနေဲ့ price movement တှကေို ဟောကိနျးထုတျတဲ့ (တှကျထုတျတဲ့) နညျးစနဈပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနညျးစနဈဟာ trading volume, Price of instruments တှေ ဖွဈရမယျ့ အခွအေနတှေေ ထကျကို ဈေးကှကျထဲမှာ အမှနျတကယျ ဘာတှေ ဖွဈပကျြခဲ့သလဲ ဆိုတာနဲ့ ပိုမိုသကျဆိုငျနပေါတယျ။ အဲ့ဒီလို ဖွဈပကျြခဲ့တဲ့ data အခကျြအလကျတှကေို အသုံးပွုပွီးတော့ Charts တှကေို ရေးဆှဲ ဖနျတီးထားပွီး ပွနျ လညျ အသုံးခတြာလညျး ဖွဈပါတယျ။
Technical analysis ရဲ့ အဓိကကတြဲ့ အားသာခကျြ တဈခုကို ပွောပွရမယျဆိုရငျ အတှအေ့ကွုံရငျ့တဲ့ Technical trader တဈယောကျဟာ currencies markets မြားစှာနဲ့ currencies market instruments တှကေို တပွိုငျနကျတညျး အလှယျတကူ လလေ့ာ တှကျထုတျ နိုငျတာပါပဲ။Technical analysis ဟာ မရှိမဖွဈ လိုအပျတဲ့ နိယာမ သုံးခုပျေါမှာ အခွခေံ တညျဆောကျထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အဲ့ဒါတှကေတော့
အဓိပ်ပါယျကတော့ actual price ဆိုတာ လကျရှိဈေးကှကျမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ အရောငျးအဝယျ သို့မဟုတျ အခွား အကွောငျးကွောငျ့ဖွဈပျေါလာတဲ့ ရောငျပွနျဟပျမှု တဈခုပါပဲ။ ဥပမာ Supply and demand, political factors and market sentiment တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Pure technical analyst သမား တယောကျအတှကျကွတော့ price movements တဈခုနဲ့ သာလြှငျ သကျဆိုငျနပေါတယျ။ အခွား သော ဘယျပွောငျးလဲမှုမြိုး အတှကျ မှ သူ့အတှကျ အကွောငျးပွခကျြ တစုံတဈရာ ပွစရာ မရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူက Technical analyst သမား သကျသကျသာ ဖွဈနလေို့ပါပဲ။ (အခွားအကွောငျးတှကေို သူမလလေ့ာပါဘူး)
Technical analysis နညျးစနဈ ဟာ Chart တှနေဲ့ ဖျောထုတျမှတျသား ထားနိုငျတဲ့ အတှကျ ၎င်းငျး စနဈကို ဈေးကှကျ အခွအေနရေဲ့ ပုံစံတှေ ကွာရှညျ သိမျးဆညျးထားရနျ ရညျရှယျ၍ အသုံးပွုကွပါတယျ။ ရရှိလာတဲ့ patterns အမြားစုဟာ ဖွဈနိုငျခြေ မွငျ့သော အထူး တှကျထုတျထားတဲ့ ရလဒျတှလေညျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီလို မှတျသားထားခဲ့တဲ့ patterns တှဟောလညျးပဲ ဈေးကှကျမှာ မှနျကနျတဲ့ အခွခေံ တဈခု အဖွဈ ထပျခါတလဲလဲ ပွနျဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။
Forex chart patterns တှကေို History အနနေဲ့လညျး မှတျသားထားပွနျပါတယျ။ ပွီးတော့ နှဈ ၁၀၀ အထကျ အတှကျ တောငျမှ အမြိုးအစားခှဲပေးနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။ အခြိနျအနညျးငယျ အတှငျးမှာ ပွောငျးလဲတကျတဲ့ လူသားတှရေဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာတှကေို ကောကျခကျြဆှဲနိုငျဖို့ အတှကျ ဒီမြားပွားလှစှာသော patterns တှဟော ထပျခါတလဲလဲ ပွနျလညျ ပွသပေးနပွေနျပါတယျ။ forex charts တှဟော price တှေ ပါဝငျနတေဲ့ market action တှေ အပျေါမှာ အခွခေံ ရေးဆှဲ ဖျောပွထားလညျး ဖွဈပါတယျ။ ယဘေုယအြားဖွငျ့ forex technical analysis theory မှာ အမြိုးအစား အားဖွငျ့ (၅) မြိုး ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒါတှကေတော့
· Trends (following moving average). တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
Posted on January 6, 2018 Author Ko ThantCategories Forex Lesson
58 thoughts on “TA and FA ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်ကြပါသလဲ။”
Hi there! I simply want to offer youabig thumbs up for your excellent info you’ve got here on this post.
we have developed some nice practices and we are looking to exchange methods with
as this requireagreat deal of work? I’ve virtually no understanding of computer programming however I was hoping to start my own blog in the near future.
such as yours requirealarge amount of work? I’m brand new to writingablog however I
Asking questions are actually fastidious thing if you are not understanding something fully, but this post offers fastidious understanding even.
Pretty part of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually loved account your blog
posts. Any way I will be subscribing in your augment and even I achievement you access
consistently fast. 3aN8IMa cheap flights
After exploringanumber of the articles on your site, I really appreciate your technique of writingablog.
Please check out my web site too and tell me your opinion. cheap flights yynxznuh
What’s up colleagues, how is all, and what you would like to say regarding this article, in my view its really amazing designed for
something like that before. So wonderful to find someone with some genuine thoughts on this topic.
you proceed this in future. Numerous people shall be
I just could not go away your website prior to suggesting that I really loved the standard info an individual provide for your visitors? Is going to be back steadily to inspect new posts|
WOW just what I was looking for. Came here by searching for apps
inacompromising position says:
price bookmarking for revisiting. I wonder howalot attempt you put to make one of
Previous Previous post: Daily Timeframe D1 မှသင့် Trading ကို တိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်း ၅သွယ်
Next Next post: အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်သို့ … ခြေလှမ်းငယ်လေးများ